China mmanya oyi akpa factory na-emepụta | Huanyi
Obere na nnabata - Nke a mmanya ngwa nju aka uwe bụ ìhè, kọmpat, na-adaba adaba. Naanị were ya na picnic, ọdọ mmiri, ịma ụlọikwuu, ma ọ bụ ihe omume ọ bụla iji nwee obi ụtọ ma zuru ike na ihe ọ drinksụ drinksụ dị jụụ ọbụlagodi na-enweghị bọket ice.
Ọ dị mfe iji – Tinye ọgwụ chiizler nke champeenu na friza maka ihe dị ka awa 2, ma bido na aka uwe iji zụọ mmanya ọ fastụ fastụ ngwa ngwa ma debe ha zuru oke oyi ruo ọtụtụ awa. Zuru okè iji na mmanya, biya, Champagne, wdg Ngwaahịa: 6.1 x 9.25 Inch
Aha: Akpa mmanya oyi, biya karama oyi
Ihe: Ihe mpụga gụnyere na PVC, naịlọn + PVC; n'ime ihe gụnyere CMC + Glycerin + Preservative + Mmiri dị ọcha
Arọ: Ngwaahia, na-emekarị 400g
Agba: Ahaziri, anyị ngwaahịa-acha anụnụ anụnụ, nwa, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọbara ọbara, aja aja
Nha: Ahaziri, ụdị dị iche iche dị na ngwaahịa maka ịhọrọ
Akara: Ahaziri, silkscreen logo ma ọ bụ sewning labeelu
Njirimara: Reusable; Eco-enyi na enyi, Ndị na-adịghị egbu egbu, Na-abụghị caustic
Ihe nlele: 7 ụbọchị ma ọ bụ otú enen; Ngwaahịa: 1-3 ụbọchị
Ọnọdụ ego: Ex Ọrụ, FOB, CFR, CIF, CIP
Oge ịkwụ ụgwọ: 30% tupu; 70% tupu nnyefe ma ọ bụ na ngosi nke oyiri B / L; T / T, Paypal, Western n'otu, L / C ,, na usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ
Akwụkwọ: SGS, CE, FDA wdg
Nke gara aga: Gel nkpuchi anya
Osote: nkịta jụrụ ute
Best Beer karama oyi
Champagne oyi akpa
Akpụrụ Wine Akpa
Botụma karama oyi
Wine Bottle oyi akpa
Akpa Mmanya oyi